musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Brits inofamba kubva kumateru kuenda kumahombekombe munguva ino yechando
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
90% yeBrits vanga vachironga kuenda kuzororo remitambo yechando mwaka uno wechando vari kufunga zvakare vachifarira nzvimbo dzekumahombekombe.
Mumwe mugumi UK vanhu vakuru vari kuronga kuenda kuskiing kana kuti snowboarding mwaka uno wechando uri kuuya, zvichikwira kusvika pachikamu chimwe chete muzvina (24%) chevane makore 18-34 ekuberekwa.
Kune avo varikuda kuenda kuzororo rechando ski / snowboarding, makumi mapfumbamwe muzana vanoti kusavimbika kweCOVID-90 mamiriro muEurope yose kwakonzera shanduko muzvirongwa zvavo zvechando nechinenge chikamu chimwe muzvitatu (19%) vakasarudza kuchinjana. materu kumahombekombe uye enda kuzororo rezuva rechando panzvimbo.
Iyo data nyowani * yakatarisa kuchinja kwemaitiro eavo vaironga kuenderera mberi skiing kana snowboarding zororo mwaka uno pamwe nevabereki vane makore 12-19 ekuberekwa sezvinodiwa kuti vapinde kune kamwe- kana vasina kubayiwa zvinoramba zvichikonzera nyonganyonga.
Vechishanu (20%) havacharonge kuenda mhiri kwemakungwa munguva ino yechando, nepo nhamba yakafanana (19%) vakatobhuka rwendo rweski mumwaka uno asi vari kufunga nezvekuchinja kana kukanzura.
Nenzira yakanaka, vangangoita makumi maviri muzana yeavo vanga vachironga rwendo rweski kana snowboarding munguva ino yechando vanoti vachiri kuda kuenda vachipa mitemo inobvumira kana kuronga kubhuka miniti yekupedzisira panzvimbo.
Kana zvasvika pakufamba nevachiri kuyaruka, tsvakiridzo inoratidza kuti pane kuvhiringika kunoramba kuripo kwakatenderedza mitemo yevasina kubayiwa uye vakambobaiwa 12-19 makore ekuberekwa, pakufamba nevabereki vakanyatsobaiwa.
Zvikamu zvitatu pazvishanu (61%) zvevabereki vane vana vachiri kuyaruka vanonzwa kuti kusavimbika kwakatenderedza COVID-19 kuvharika kwaita kuti vatadze kuenda kunze kwenyika munguva pfupi, nepo nhamba yakafanana (57%) ichiti kuvhiringika kwakatenderedza zvinodiwa kuti vechidiki vapinde. zvakaoma kuzvipira kuzororo remhuri mumwedzi mitanhatu inotevera.
Inenge hafu (47%) ye UK vanhu vakuru vane vana vachiri kuyaruka havazivi zvinodiwa nevana vavo, kana vachifamba nevabereki/vachengeti vakanyatsobaiwa.
*Chidzidzo chevakuru ve2,000 UK chakaitwa pakati pe23 ne26 Mbudzi neOpinium Research kuti vawane maonero pazororo remitambo yechando.